होटेलमा खाना खाएको पैसा नतिरेपछि ग्राहकलाई नै यसरी साङ्लोले बाँधेर राखियो! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > होटेलमा खाना खाएको पैसा नतिरेपछि ग्राहकलाई नै यसरी साङ्लोले बाँधेर राखियो!
होटेलमा खाना खाएको पैसा नतिरेपछि ग्राहकलाई नै यसरी साङ्लोले बाँधेर राखियो!
admin July 29, 2019 Uncategorized	0
लिमा– कुनै व्यावसायका ग्राहकले पैसा तिर्न लगाउन के सम्म गरिन्छ ? ल्याटिन अमेरिकी मुलुक पेरुमा भने पैसा तिराउने घटनाले हदै पार गरेको छ । पेरुमा खाएको पैसा तिर्नका लागि एकजना ग्रहकलाई रेष्टुरेन्टमा साङ्लोले बाँधेर राखिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । भेनेजुएलामा आर्थिक तथा राजनीतिक संकटबाट भागेर पेरु पुगेका एक जनालाई रेष्टुरेन्टमा साङ्लोले बाँधेर राखिएको घटना सार्वजनिक भएको हो ।
ला पटिला अखबारका पत्रकार लुइस मार्टिनेजले साङ्लोले बाँधेर राखेको राखेको घटना सार्वजनिक गरेका हुन् । समाचारसँगै सार्वजनिक गरिएका तस्बीरमा ती ग्राहकलाई कुर्सीमा साङ्लोले बाँधेर राखिएको छ ।ती तस्बीरहरु साङ्लोमा बाँधिने ग्राहक आफैँले खिचेको बताइएको छ । भेनेजुएलाबाट आएका आप्रवासीका साथमा पैसा नहुने र उनीहरुले खाएको पैसा नतिर्ने भएकाले ती अप्रवासीलाई साङ्लोले बाँधिएको जनाइएको छ ।
ला पटिला अखबारले भने ‘विदेशीलाई घृणा गर्ने भावना’ का कारण यस्तो घटना घटेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले ऐलानी जग्गा तथा भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने
पहिरोले गाडी पुरिँदा भयो तिर्थालुहरूकाे मृ*त्यु, ८ घाइते
कञ्चनपुरबाट आयो दुखद खबर, २ युवतीकाे मृत्यु!
आजबाट काठमाडौं उपत्यकामा शुरू भएको निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?
पुडासैनीको श्रीमति पति शोकमा रुँदारुँदै वे होस् – भिडियो सहित
कोठामा सुतेकि युवती बाहिर भुइँमा मृत भेटिइन, …तालिम प्राप्त कुकुर घरभित्रै पस्यो
हार्दिक बधाई! बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ ‘राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७७’ बाट सम्मानित